Global Voices teny Malagasy » Nahoana no Niara-niròna tao Amin’ny Sisintany Amerikana Ireo Mpitady Fialokalofana Miisa 78, Na dia Mety Holavina Aza Ny Fangatahan’izy ireo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Mey 2017 4:33 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Avaratra, Amerika Latina, Etazonia, Ady & Fifandirana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana
Ity tantara avy amin'i Erin Siegal McIntyre  ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 8 Mey 2017. Navoaka eto indray izany noho ny fiarahamiasa eo amin'ny PRI sy ny Global Voices.
Nokarakarain'ny ekipa mpikatroka Amerikana sy Meksikana avy ao amin'ny vondrona Pueblo Sin Fronteras , nandao ny sisintany Meksikana atsimo ao an-tanànan'i Tapachula ny Viacrucis de Refugiados, na Valalamanjohin'ny Mpitsoa-ponenana tamin'ny 9 Aprily.
Mampiseho ny antontanisa azon'ny  Anjerimanontolo Transactional Record Access Clearinghouse (Trac) ao Syracus fa nolavina ny fangatahan'ny ankamaroan'ireo mpitady fialokalofana.
Tamin'ny hetran'ny taona 2016, ny tahan'ny fandavàna amin'ny ankapobeny dia 57 isanjato . Ho an'ny Amerikana Afovoany, mbola ambony izany. Manodidina ny 10 ka hatramin'ny 23 isanjato ihany no nahazo fialokalofana.
Ara-potoana ny fahatongavan'ny Karavana tao amin'ny sisintany Amerikana. Nilaza  ny Sekreteran'ny Fiarovana Amerikana, John Kelly vao haingana fa mino izy fa tsy azo atokisana ny “ankamaroan'ny olona” nanolotra fangatahana fialokalofana.
Ny tatitra  navoakan'ny fikambanana “Zon'olombelona no Voalohany” tamin'ny 3 Mey kosa dia nandrakitra tranga maningatsingana miisa 125 mikasika ireo mpitady fialokalofana voaraoka fa tsy mba nozahàna ny fangatahan'izy ireo. Tranga niseho tao amin'ny fidirana amin'ny seranan-tsambo fito manerana an'i Kalifornia, Texas ary Arizona..
Efa nilaza  ny sampan-draharaha teo aloha fa manaraka ny fitsipika izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/16/99831/
 57 isanjato: https://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/immigration/b/outsidenews/archive/2016/12/13/asylum-denial-rates-rise-to-57-percent-in-fy-2016-unrepresented-increase-trac.aspx?Redirected=true